Nin 40 sanadood sawirrayay duufaanaha, biriqda iyo dabaylaha daran ee dalka Maraykanka! (Arag sawirradii uu qaaday) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Nin 40 sanadood sawirrayay duufaanaha, biriqda iyo dabaylaha daran ee dalka Maraykanka!...
Nin 40 sanadood sawirrayay duufaanaha, biriqda iyo dabaylaha daran ee dalka Maraykanka! (Arag sawirradii uu qaaday)
(Montana) 01 Nof 2019 – ‘Marka aad aragto duufaan cirka kasoo dhacaysa, ama dabayl xooggan oo samaysmaysa, waa ku haysataa.’
Sawir qaade Eric Meola ayaa MailOnline Travel uga sheekeeyay sida uu dareemayay marka aad dhex taagan tahay cimilo aan waxba cafinaynin oo aan la saadaalin karin – taasoo ah arrin uu waayo badan usoo joogey intii uu ku jirey shaqadiisa ama mihnaddiisa sawir qaadista.
Meola ayaa 40 sanadood ka badan sawirro ka ururinayay duufaanta, biriqda iyo dabaylaha daran ee dhulka tigaadleeyda ah ee Maraykanka sida South Dakota, Montana, Nebraska, Texas, Colorado, Wyoming iwm, min 1977 ilaa 2019.
Wuxuu mudadaa qaaday sawirro cajiib ah oo muujinaya quruxda dabeecadda ee hoos ka daawo.
Previous articleDARAASAD: Ragga oo la sheegay inay haweenka ka shactiro badan yihiin, sababta
Next article”Laba CILLADOOD oo waawayn ayaan markasta ku arkaa Garoonka Aadan Cadde!”